Mareykanka: FBI oo baareysa Soomaali gaaloobay oo dilay wiil Soomaali Ahludiin ah – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareykanka: FBI oo baareysa Soomaali gaaloobay oo dilay wiil Soomaali Ahludiin ah
9th December 2014 A warsame Af Soomaali, Featured 0
Mareeg.com: Hay’ada Danbi Baarista Maraykanka FBI ayaa sheegtay inay gacanta ku heyso dilkii uu nin Soomali ah oo Kirishtaan ah u geystay Wiil Soomaali ah oo 15 jir ah, wiilkaasi oo xaafidul Quraan ah ayaa la dilay xili uu kasoo baxay Masaajid.
Cabdisamad Shiikh Xussen oo ah 15 sano jir kana mid ahaa dhalinyarada ku xirnaa masaajidka magaalada Kansas ee dalka Maraykanka ayaa habeenimadii Khamiistii lasoo dhaafay u dhintay dhaawac kasoo gaaray gaari la jiirsiiyey xili uu kasoo baxayey masaajidka.
Ninka dilkan geystay ayaa ah Soomaali Kirishtaan ah oo in muddo ah u hanjabayey Soomaalida ku dhaqan magaalada Kansas ee u cibaado tagta masaajidka uu ku xirnaa Marxuum Cabdisamad.
Booliiska Maraykanka oo soo qabtay ninka dilka geystay oo lagu magacaabo Axmed H. Aden oo 34 sano jir ah ayaa markii hore sheegay inuu si khalad ah shilka u dhacay, balse markii danbe qirtay inuu gaari si ulla kac ah u jiirsiiyey wiilkan oo uu moodayey inuu ahaa nin ay horey dagaal uga dhaxeeyey.
(Ninka dilka geystay)
Balse waxaa soo shaac baxeysa in Danbiilahan uu horey muddo dheer hanjabaad ugu waday dadka Soomaalida ah ee ku dhaqan magaalada Kansas. NInkan ayaa gaarigiisa kusoo dul qori jiray erayo ka dhan ah Muslimiinta isla markaana gaarigiisa hor dhigi jiray Masaajidka.
(Gaariga nin dilka u geystay wiilka Xaafidul Quraanka ah)
Horey ayey Soomaali badan iyo ninkan Soomaaliga Kirishtaanka ah dood u dhexmartay iyadoo Soomaalida ku dhaqan magaalada Kansas ay muddo dheer la yaabanaayeen ninkan sida waalida ah u dhaqma. Balse Booliiska Kansas ayaan wax tilaabo ah ka qaadin ninkan oo horey ugu hanjabay inuu dili doono Soomaalida tagta masaajidka.
Habeenimadii Khamiista markii uu weerarkan dhacay ayey Soomali badan oo goobta ku sugnaa isku dayeen inay qabtaan ninkan gaariga jiirsiiyey wiilkan yar, wuxuuna ninkan ulla soo baxay Mindi iyo Bistoolad. Walow ay ku guuleysteen Soomaalida inay Booliiska u tilmaamaan goobtuu ku sugnaa.
Hay’ada Danbi barista ee FBI oo ah mid heer Federaal ah ayaa gacan kasiineysa Booliiska Kansas Baaritaanka dilka Marxuum Cabdisamad oo ahaa wiil yar oo edeb badan isla markaana laga jeclaa deegaanka uu ku dhaqnaa ee magaalada Kansas.
Danbiilaha Axmed Aden oo la horkeenay Maxkamada Jimcihii lasoo dhaafay ayey xeer illaalinta codsatay in xabsiga lagu hayo inta baaritaanka socdo, waxayna maxkamad Damiin ugu xukuntay lacag gaareysa 250.000 (labo boqol iyo konton kun oo dollar). Taasi oo ku khasabtay Danbiilaha inuusan fursad u helin inuu damiin ku baxo.
Soomalaida ku dhaqan magaalada Kansas ayaa ku dhaliilay Booliiska inaysan wax ka qaban digniino horey looga bixiyey ninkan sida joogta ah weerarka ugu hayey Soomaalida muslimiinta ah ee magaaladaasi ku dhaqan.
Ehelada Marxuum Cabdisamad ayaa sheegay inay ku faraxsan yihiin in lasoo qabtay ninka dilkan foosha xun u geystay wiilkan yar, balse ay ahayd in horey loo qabto danbiilaha oo horey looga yiqiinay magaalada.
Cabdisamad Shiikh Xussen oo ahaa arday waxbarashada ku fiican iskuulka, halka uu si joogto ah ugu xirnaa masaajidka, wiilkan oo 15 sano jir ah ayaa habeenka la dilay habeenkii ka horeeyey Salaada Makhrib tujinayey muslimiinta ku cibaadeysta masaajidka ku yaal magaalada Kansas.
Marxuum Cabdisamad ayaa Sabtidii lasoo dhaafay lagu tukaday Salaada Janaasada oo ay kasoo qeyb galeen boqolaal Soomaali ah oo ka tiiraanyeysnaa geerida wiilkan yar.
Suldaan ka goostay Somaliland oo maleeshiyaad uruursaday
Bush, Ex-CIA Chiefs: Senate Report on Torture Wrong on ‘Rogue Program’